mpamatsy baoritra fanentanana, maotera mandeha maotera, motera china
mpitondra akora mpanamboatra maotera, masera mandeha maotera mandeha amin'ny masera
Ny NER GROUP no foibe any Shina izay natsangana hatramin'ny 30 taona lasa ary Yantai Bonway Manufacturer Co., Ltd no sampana any amin'ny tanibe China izay orinasa matihanina manana haitao matihanina manokan-tena amin'ny haitao elektrika sy herinaratra mandeha amin'ny herinaratra izay maodely indrindra amin'ny gearmotors, kofehy, boaty fanodinana indostrialy ary motera elektrika. Miaraka amin'ny rafitra serivisy aorinan'ny varotra tsara indrindra, nanangana sehatr'asa marobe izahay ho an'ireo tetik'asa injeniera maro any amin'ny firenena maro, izay an'ny Eropa, Moyen Orient ary Amerika atsimo.
MISY MISY, FIVORIANA, VALANA
Ny NER dia mahazo ny toerany ho mpamatsy eran'izao tontolo izao amin'ny vokatra fifampitana herinaratra.Raha reharehantsika ny tenantsika ho orinasam-pifandraisana izay tsy vitan'ny hoe manao ny orinasa manana fenitra etika avo sy matanjaka, fa amin'ny maha-orinasa manangana ny fifampatokisana amin'ny mpiray tsikombakomba ary miteraka fandraisana anjara betsaka. amin'ny fiaraha-monina amin'ny fanomezana teknolojia sy serivisy tsara kokoa mandritra ny 100 taona manaraka.
Ilay Taona naorina
Nomery ho an'ny mpanjifa
Izy ireo dia manam-pahaizana manokana manampy anay soultion injeniera be ho an'ny masininay. Faly izahay fa miara-miasa amin'ny Sogears Group. Ny vokatra rehetra avy amin'izy ireo dia miasa tsara, tsy misy fivoahana, tsy misy tohiny, tsy misy shimmies, miaraka amin'ny fotoana fitarihana haingana kokoa, fomba fandefasana fifaninanana bebe kokoa ary ny tena zava-dehibe, kalitao avo lenta! Na izany na tsy izany, heveriko fa izy ireo no mpamatsy tsara indrindra avy amintsika.
Ankasitrahako ny vidiny ambany omen'izy ireo ahy efa ho 10 taona izao ary tsy miova mihitsy. ary ny boaty fiaran-dalamby dia mandeha mangina ary milamina hatrany. Vokatra tsara tsy vita miverina! Tena tokony hidera ny ekipa aho, tsara izy ireo!
Heveriko fa ny zava-dehibe indrindra dia ny serivisy ho an'ny mpanjifany, haingana sy mandaitra。 Isaky ny manana fanontaniana momba ny fiara fitaterana izahay dia manontany azy ireo ary hamaly izahay ao anatin'ny 30 minitra. Mazava ho azy, amin'ny mailaka! Raha miresaka momba ny whatsapp isika dia tsy handany fotoana firy. Ka raha fintinina dia izay ilaintsika no valiny haingana indrindra amin'ny fanontaniantsika ary izy ireo no orinasa tadiavintsika ary azo antoka fa mpiara-miasa amintsika foana izy ireo.
Nitsidika ny orinasan'i Sogears ny ekipanay ary manome anay fanohanana mahaliana izy ireo, matihanina, filana, indrindra ho an'ilay injenieran'ny varotra Lance, tsapako fa nanao ny zavatra rehetra tamim-pahazotoana izy. Nampitaha orinasa Shina betsaka izahay ary tiako i Sogears Only. Tsy omeko azy ireo ny laza tsara, fa mendrika izy ireo!